Madaxweynaha Somaliya oo la kulmay Saraakiisha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida | Baydhabo Online
Madaxweynaha Somaliya oo la kulmay Saraakiisha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida
Madaxweynaha dowladda Federaalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu xafiiskiisa kula kulmay madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Somaliya.
“Saraakiil dhallinyaro ah oo si daacadnimo ay ku jirto ugu qidmeeyay shacabkooda ayaa tihiin waana tan aad ku muteysateen ammaanta iyo bogaadinta ka imaaneysay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaana idinku guubaabinayaa in aydaan cidna uga hibeysanina shaqada garsoorka ee aad qaranka wakiilka uga tihiin, taas ayaana alle idinkula xisaabtamayaa.” ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu Dambeyn mas’uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Somaliya ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu si wanaagsan ula shaqeeyey maxkamadda, islamarkaana aysan arag wax faragelin ah oo dhankaxafiiska madaxweynaha uga timid.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa qaada Kiisaska Shabaabka iyo ciidamada ka tirsan Dowladda ee gala dambiyada ka dhanka ah shacabka.